Dib U Habayn Iyo Qalabayn Lagu Sameeyay Dukaanka Dharka Ee Diesel Oo Laga Furay Hargeysa – Araweelo News Network (Archive)
Hargeysa (ANN)- Dukaanka loogu magac daray shirkadda dharka ka ganacsata ee dalka Maraykanka ee Diesal oo laga furay Hargeysa, ayaa dib-u-habayn ballaadhan lagu sameeyey, iyadoo la keenay noocyada dharka iyo kaba xaraga loogu talogalay oo kala duwan.
Dukaanka Diesel oo ah mid casri ahm isla markaana loogu talo galay in lagu iibiyo dharka iyo kabaha xaragada iyo sidoo kale Sports-ka oo badhtamihii bishii March ee sannadkan 2012 Hargeysa laga furay, ayaa dib loo furay. Kadib markii uu in muddo ah xidhnaa, iyadoo lagu sameeyay balaadhin, qalabayn iyo dib-u-habayn, waxaana mar kale maanta dib looga furay dabaqa Hoose ee fooqa Ismaaciil Hindi ee wadada Togdher ee caasimadda Hargeysa, iyadoo lagu iibinayo dharka kala duwan, kabaha, kiriimmada madaxa, qalabka ciyaaraha iyo dhamaan agabka lagu xaragoodo sida muraayadaha indhaha oo noocyo kala duwan ah.
“Dukaankan aannu furnay waxaannu ugu tallogalnay in aanu dhallinyarada iyo dadka kaleba u keeno dhar casri ah, kabbo tayo leh, qalabka ciyaaraha, lebiska xarradaga, Dukaankan waxaanu ugu magacdarnay shirkadda weyn ee Dharka casriga ah ee caalamka ugu tayada fiican samaysa oo ah DIESEL, waxaannanu jecelnahay in qofka dukaankayaga soo booqdaa uu ka heli doono dhar iyo kabo cajabiya oo tayadoodu sarayso.” Sidaa waxa yidhi maamulaha dukaanka Diesel Maxamed Xuseen Jaamac (Roodhi) oo sharaxaad ka bixinayey dukankooga cusub ee Diesel. Ee Hargeysa laga furay.
Maamulaha dukaanka Diesel, waxa uu caddeeyey inuu dhalinyrada iyo carruurtaba dukaankoodu u hayo dhar iyo kabo tayo leh oo ay in muddo ah ku xaragoodaan, isagoo xusay inay ku dedaali doonaan sidii ay caasimadda Hargeysa u keeni lahaayeen dhar nooccyo kala duwan ah oo ay samayso shirkadda caanka ah ee Diesel ee looga bartay dharka tayada leh iyo kabo tayadoodu saraysaba.
Mobile 00 252 2 442 8803
00 252 2 4001325
Published May 20, 2012 By info